ပန်ဒိုရာ: ပိုပို မိုမို ဂိုဂို - အပိုင်း ၄
(ဆက်ရန်) အပေါ်က ကပ်လျက် ကွက်လပ်စာပိုဒ်ကြီးကိုပါ Select လုပ်ပြီး ကြည့်တဲ့အခါ ဘာစာမှ မတွေ့ရဘဲ ကွက်လပ်ကြီးပဲ မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက် ကြေကွဲဝမ်းနည်းစွာ ပြန်သွားပါတော့တယ်။
လူတွေကတော့ လစ်ရင် လစ်သလိုပဲ. . .
ပြောတော့ဘူး. .မပြောဘူးဆို ပြောကို မပြောတော့ပါဘူး။
ကိုပေါ ... fix လုပ်လိုက်ပြီဗျို့
ငန်းပေါက်လေးတွေတန်းစီပြီးရေကူးကြတာကို စိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်တာ ချစ်စရာလေးတွေတော့...။
အပေါ်က ကွက်လပ်လေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တယ် သနားဖို့ကောင်းလိုက်တာ...။
မိုးငွေ့( ဒီတစ်ခါတော့ နာမည်မမှားတော့ပါ )
ဒီတိုင်း တခေါက်ဖတ်ပြီး ဝမ်းနည်းချင်လဲ နည်းပါစေတော့ ဆိုပြီး အဖြူရောင် စာပိုဒ်တွေလဲ Select လုပ်ပြီး ဖတ်သွားပါတယ်... သိကလဲ သိချင်သေးတာကိုး...း))
အကုန်ဖတ်ပါတယ် ... ဒိုဒိုတို့များ..ဘဲတွေကို အဆက် လုပ်ထားတာ ပိုင်တယ် ...
Q စီကြတာကို သဘောအကျဆုံးပဲ....။
အပိုင်း ၅ ကိုစောင့်မျှော်နေပါကြောင်း..။
တန်းစီပြီး လာဖတ်တယ် ပြီးတော့ စောင့်ဖတ်နေအုံးမယ် ဒေါ်လေးရေ ...။
ဘဲမွေးချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာရဲ့။ နားထဲမှာ တဂတ်ဂတ်..မြည်သံတွေ၊ တောင်ပံရိုက်သံ တဖြန်းဖြန်းတွေတောင် ကြားမိသေး။ နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ ဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ မဆလာထုပ်ကိုင်ရင်း စောင့်မျှော်လျက်.. :P
ဘဲငန်းလေးတွေ ရေထဲမှာ အကြာကြီး ဇိမ်ခံ ကူးနေရင် ကျန်တဲ့ဘဲလေးတွေက ၀ိုင်းဆူပူကြတာကို သဘောအကျကြီး ကျနေမိတယ်။
အနှစ် ၂၀ ကျော်ပြီ၊ နေရာဖယ်ပေးတော့ ..ဆိုသလို နေမှာပေါ့။ :))